नेपालमा १४ जिल्ला छन् भनेपछि भाइरल भईन कलाकार पूजा शर्मा ! - Sagarmatha Online News Portal
नेपालमा १४ जिल्ला छन् भनेपछि भाइरल भईन कलाकार पूजा शर्मा !
काठमाडौं । कलाकार पूजा शर्मा ट्रोलको शिकार बनेकी छिन् । नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने समेत भन्न नसकेपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
प्राइम टाइम्सको भिडियो अन्तर्वार्तामा पत्रकार प्रकाश सुवेदीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूजाले नेपालमा १४ जिल्ला भएको बताएकी थिइन् । उनलाई पत्रकार सुवेदीले सोधेका थिए, नेपालमा यतिखेर कतिवटा प्रदेश छन् ?
पूजाले नेपालमा १४ वटा जिल्ला भएको उत्तर दिएकी थिइन् । यो भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ भने नेपाली कलाकारको अज्ञानतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
प्राइम टिभीको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको उक्त भिडियो हटाइएको छ । भिडियो किन हटाइयो भन्ने खुलाइएको छैन ।